Uvo yinto umuntu noma iqembu labantu abayicabangayo. Ukuthi "Luthini uvo lwakho?" kuyafana nokuthi: "Ucabanga ini?" Impendulo ingaqala ngokuthi: "Uvo lwami." noma "Ngicabanga." Kwezinye izikhathi, izinkampani ziyaye zizame ukuthola ukuba abantu b ...